Umlilo ophakathi kwabantu: Fumanisa, ukuQhafaza, uKwabelana, kunye noPapasho lweMixholo yakho kwiMithombo yeendaba yezeNtlalo | Martech Zone
Umlilo omninzi: Fumanisa, uQeqeshe, wabelane, kwaye upapashe umxholo wakho kumajelo eendaba ezentlalo
Lwesine, ngoFebruwari 18, 2021 Lwesine, ngoFebruwari 18, 2021 Douglas Karr
Omnye wemiceli mngeni emikhulu yokugcina nokukhulisa ubukho beendaba zenkampani yakho kukubonelela ngomxholo obonelela ngexabiso kubalandeli bakho. Elinye iqonga lolawulo lweendaba zosasazo elivelela okhuphisana nabo koku Umlo wabantu.
Awunakho ukulawula iiakhawunti ezininzi zosasazo lwasentlalweni, ukubeka esweni igama lakho, ishedyuli kunye nokwenza ngokwakho ukupapasha kwakho… Umkhosi womntu onomlilo ukwanayo nenjini yokuphelisa apho unokufumana umxholo othandwayo kwimidiya yoluntu kwaye ulungele abaphulaphuli bakho.
Ukufunyanwa komxholo weCrfirefire kunye noKhuphelo
Umlo wabantu yenza ukuba ufumane amanqaku kunye nemifanekiso abaphulaphuli bakho abaya kuyithanda, ke unokuwabelana nazo zonke iiakhawunti zakho zentlalo ukugcina amaxesha akho exesha.
Nalu ushwankathelo lwenjini yabo yengcebiso:
Ukupapashwa kweMixholo yoMlilo oZenzekelayo
Gcina iliso ngaphandle kohlaziyo oluvela kwiwebhusayithi yakho, ibhlog, okanye iivenkile ezikwi-intanethi, kwaye wenze izithuba ezikhawulezayo nezinhle kuzo zonke uhlaziyo ukuze wabelane ngokulula kuzo zonke iinkangeleko zentlalo. Umlo wabantu yenza ukuba abapapashi badibanise umxholo we-RSS feeds ukuze bapapashe ngokuzenzekelayo kwiiakhawunti zabo zentlalo.
Isiqulatho somlilo esiCwangcisiweyo
Umlo wabantu inokusebenza okuhle ukucwangcisa zonke iiposti zakho kwangaphambili kwaye uzipapashe ngokuzenzekelayo kumaxesha amahle okanye ngamaxesha akhethwe nguwe, ukugcinela iitoni zexesha kunye nomzamo.
Umlo wabantu ngokuzenzekelayo Yenza ngokwezifiso iiposti zakho ukuzilungiselela kwisitishi ngasinye seendaba zosasazo, ususe intloko yokuyila izithuba ezahlukileyo kwisithuba ngasinye.
IsiXokelelwano somlilo esiZenzekelayo sinika ingxelo yeendaba
Umlilo omninzi unomakhi wengxelo owenza ukuba abathengisi bakwazi ukwakha, ukucwangcisa, kunye nokwabelana ngeengxelo zesiko lobuchwephesha ngamanqaku edatha ofuna ukuwaqaqambisa.
Yongeza zonke iinethiwekhi zentlalo ozikhethileyo kwingxelo enye
Itemplate engaphandle kwebhokisi yazo zonke iimfuno zakho zokunika ingxelo
Khetha kwaye ukhethe amanqaku edatha abalulekileyo kuwe
Khuphela i-PPT kunye nePDF ezilungele ingxelo
Ishedyuli yeveki / yenyanga ingxelo yokuthumela ngaphandle ngqo kwi-imeyile yakho
Joyina i-19 yezigidi zabasebenzisi ukonyusa ishishini lakho ngokwenza umxholo weendaba zosasazo kunye nokupapasha!
Qalisa ukuSimahla ngesiXhobo soMlilo
Ukubhengezwa: Ndililungu le Umlo wabantu.
tags: umxholo wekharityhulamukufunyanwa komxholoisihlweleulawulo lwegamarss kwimidiya yoluntuImidiya yokuncokolaizaziso zosasazo zasekuhlaleniuhlalutyo kwimidiya yoluntuUmxholo wemidiya yoluntuulawulo lweendaba ezentlaloukukhankanywa kwimidiya yoluntuukubeka iliso kwimidiya yoluntuukupapashwa kwimidiya yoluntuingxelo yemidiya yoluntuishedyuli yemidiya yoluntuUkucwangciswa kweendaba ezentlalo